हिमाल खबरपत्रिका | व्यवहारवादी भिक्षु अश्वघोष
कोरा सिद्घान्तमा भन्दा व्यवहारमा विश्वास गर्ने भिक्षु अश्वघोष महास्थविर बौद्घ समाजको तडकभडकप्रति विमति राख्थे।
भिक्षु महासंघका संघनायक भिक्षु अश्वघोष महास्थविरले ७७ वर्षको भिक्षु जीवन— बौद्ध धर्म–दर्शनको विषयमा थुप्रै प्रवचन, जिज्ञासुका प्रश्नको उत्तर, लेख–पुस्तक प्रकाशन तथा अन्य धार्मिक गतिविधिमा सामेल भएर विताए । वि.सं. १९८३ मा पाटनको ओकुबहालमा जन्मिएका महास्थविर १६ वर्षको उमेरमा भिक्षु जीवनमा प्रवेश गरेका थिए । २२ चैतमा निधन भएका उनै भिक्षु अश्वघोषको त्यसको दुई दिनपछि कर्णद्वीप, काठमाडौंमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको थियो ।
अन्त्येष्टि समारोह भइरहँदा एक छेउमा बसेर यो पंक्तिकार गम्दै थियो– धर्म–दर्शनमाथि तर्क–वितर्क गर्न आफूकहाँ आउनेहरू कतिलाई यी भिक्षुले प्रभाव पारे होलान् ? एक जना त पंक्तिकार नै थियो । युवावयमा धर्म–दर्शनको अध्ययन र चिन्तनमा लाग्नेहरूको एउटा वर्ग यस विषय सम्बन्धी भेटेजतिका व्यक्तिहरूसँग वादविवाद गर्दै हिंड्ने, सकभर तर्कले पराजित गर्न खोज्ने स्वभावका हुन्छन् । कतिपयले यसलाई नकारात्मक माने पनि यो सिकाइको एउटा काइदा हो ।
भिक्षु अश्वघोषको गृहस्थ नाम बुद्धरत्न शाक्य हो । आमा लक्ष्मीमायाको प्रेरणाले घरबार छाडेर भिक्षु संघमा प्रवेश गरेका उनले भारतको कुशीनगरमा ॐ चन्द्रमुनि महास्थविरको उपाध्यायत्व र भिक्षु अमृतानन्दको आचार्यत्वमा श्रामणेर (घरबार छाडेर भिक्षु बन्ने तयारी) ग्रहण गरेका थिए । श्रामणेर प्रवज्यापछि भिक्षु धर्मरक्षितसँग पालि र हिन्दी भाषा सिकी अध्ययनका लागि श्रीलंकाको मातरमा रहेको महामहिन्द्र परिवेण (तालिम केन्द्र) पुगे । त्यहाँका प्रधानाचार्य धर्मकीर्ति श्री धम्मावास नायक महास्थविरको उपाध्यायत्वमा १ मई १९४९ मा अश्वघोष पूर्णरूपमा भिक्षु बने ।
बौद्ध गतिविधिमा सक्रिय हुँदै उनले औपचारिक अध्ययन स्नातकलाई अघि बढाएका थिए । तर, क्षयरोग लागेपछि पूरा गर्न सकेनन् । उपचारका लागि चीनको बेइजिङ पुगेका उनले चिनियाँ जनवादी क्रान्तिका नायक माओत्सेतुङ र नेता चाउ एन लाइसँग भेट गरे । त्यहाँ चिनियाँ समाज र विकासको गति देखेका उनी कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट प्रभावित भए । त्यसपछि कम्युनिष्ट र बौद्ध दर्शनको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने तथा कम्युनिष्ट सिद्धान्तले समाज परिवर्तन गर्न सकिने दृष्टिकोण बनाएर बोल्दै हिंड्न थाले । नेपाल फर्केपछि उनले आफ्नो कोठामा कार्ल माक्र्स, माओत्सेतुङ लगायतका नेताहरूको तस्वीर झुन्ड्याउन थाले । एक भिक्षुको कोठामा ती नेताको तस्वीर झुन्डिनु विरोधाभास थियो । त्यस्तो नगर्न गुरु भिक्षु अमृतानन्दले सम्झउने धेरै प्रयास गरे पनि आफू बरु गृहस्थमै फर्कन तयार रहेको अश्वघोषको जवाफले गुरुलाई चुप बनायो ।
भिक्षुु अश्वघोष कोरा सिद्धान्तका आस्थावान् नभई व्यवहारवादी रहेका उनका लेख र पुस्तकबाट थाहा हुन्छ । उनका लेखहरूमा गहन दार्शनिक चिन्तन भन्दा व्यावहारिक कुरालाई नै जोड दिइएको छ । तिनमा प्रायः सामाजिक जनजीवनलाई बौद्ध धर्मदर्शनको पक्षबाट निरुपण गरिएको पाइन्छ । ‘व्यावहारिक प्रज्ञा’ पुस्तिकाको भूमिकामा उनले बुद्धको मूल शिक्षा प्रज्ञाबारे पुस्तक लेख्न आफू अघि सरे पनि यो विषय गम्भीर रहेको र आफूसँग समेत नरहेको स्वीकारोक्ति प्रकट गरेका छन् ।
भिक्षु अश्वघोष बौद्ध समाजमा हुने तडकभडकप्रति पनि विमति राख्थे । ‘मान्छेको लागि सिद्धान्त हो, सिद्धान्तको लागि मान्छे होइन’ भन्ने धारणा राख्ने उनी संभवतः विकासको दृष्टिकोणले नै चिनियाँ कम्युनिष्टबाट प्रभावित बनेका थिए । आफूलाई मानिसहरूले कम्युनिष्ट भने पनि त्यो मिथ्या रहेको उनको जिकिर थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गठित राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन नेकपा (एमाले) बाट उनी मनोनीत भएका थिए, जसबाट उनी आलोचित भए । तर, राजनीतिक दलले मनोनयन गरेकै आधारमा उनी सांसद हुन गएका थिएनन् । बरु उनी जस्तै व्यावहारिक अर्का भिक्षु सुदर्शन महास्थविरको पहलमा संसदमा बौद्ध दृष्टिकोण राख्न सजिलो हुने ठानी संघबाट नै अनुमोदन गराएर पठाइएको थियो । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणाको माग यसैको परिणाम हो ।
नेपाली बौद्ध समाजमा भिक्षु अश्वघोष रिसाहा भन्तेका रूपमा पनि चिनिन्छन् । तर, तर्ककै लागि गरिएका यो पंक्तिकारका त्यसबेलाका प्रश्नहरूमा क्रोध गर्ने ठाउँ प्रशस्तै भए पनि उनी कहिल्यै क्रूद्ध भएनन् । उनी ‘भिक्षु जीवन असाध्यै कठिन छ, यसबारे थाहा पाएको भए शायद भिक्षु नै बन्ने थिइनँ’ भन्थे । तर भिक्षुहरू चाहिन्छ भन्दै तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने पहिलो भिक्षु उनी नै हुन् । सबैभन्दा बढी शिष्य भएका भिक्षु पनि उनी नै थिए ।